I-Dest Quality Iphrinta ye-Flat Flat China Manufacturer
Incazelo:Iphrinta ye-UV ephezulu kakhulu,Iphrinta ye-UV engcono kakhulu ye-UV 2017,Iphrinta ye-UV engcono kakhulu ye-UV 2018
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta ye-UV ephepheni > I-Dest Quality Iphrinta ye-Flat Flat
I-Dest Quality Iphrinta ye- Flat Flat yimuphi umbala ingashicilelwa ngokusebenzisa inkinobho enemibala nemhlophe e-UV. I-Dest Quality UV Printer Flatbed iyakwazi ukunyathelisa ngokuqondile ngaphandle kokugqoka ngaphambili, ukushisa noma noma yikuphi ukuthambisa. Iphrinta yethu ifakwe kokuphefumula kwamanzi namanzi, okuvumela inkinobho ye-UV ukuba yome ngokushesha ngemva kokunyathelisa. Siyacaca ukuthi amaphrinta ngaphandle kohlobo lwesikhumba ngokuvamile ahlangane nenkinga ukuthi umshini ungangcoliswa yi-inki, okwenza kube nezimpikiswano eziningi. Kodwa iphrinta yethu ifakwe ngomoya onamandla wokukhipha ukukhipha inkinobho, ngaleyo ndlela inciphise ukukhubazeka okukhulu. Ehlanganiswe nepompo yokulwa nokulimala, impilo yayo iyanda ngokusobala.
Izici eziwusizo zephrinta yethu ye- UV ephezulu kakhulu ye-UV 2017 RF-A3UV:
2. Iphrinta ye-A3 ye-UV engasetshenziswa ingafakwa ngeSensor Detecting sensor, ukuvikela ikhanda lokuphrinta;
Iphrinta ye-UV ephezulu kakhulu Iphrinta ye-UV engcono kakhulu ye-UV 2017 Iphrinta ye-UV engcono kakhulu ye-UV 2018 Iphrinta ye-CD eshibhile kakhulu Iphrinta ephezulu kakhulu yezinsizi Iphrinta ye-UV ephepheni Iphrinta ye-UV ephrintiwe kabusha Iphrinta ye-UV ephathekayo UK